Accueil > Gazetin'ny nosy > Governemanta vaovao : Miova ihany koa ireo teknisianina
Governemanta vaovao : Miova ihany koa ireo teknisianina
Andao hatao hoe teknisianina avokoa ireo olona rehetra izay mpiasam-panjakana ambony hiara-miasa amin’ireo minisitra ireo. Ny manodidina azy akaiky dia ny mpiandraikitra pôlitika antsoina hoe kabinetra. Ny kabinetra dia mazava ho azy fa tsy maintsy mpanao pîlitika satria izy ireo no mamaritra ny pôlitikan’ny fanjakana ho tanterahan’ny teknisianina ambony na mpiasam-panjakana ambony ireo.
Koa satria olona mitovitovy fijery no tsy miantsy miara-dia dia tsy maintsy olona afaka hiara-miasa koa izany no afaka hiara-mitantana. Noho izany dia tsy maintsy hiova ny olona rehetra tao anatin’ny kabinetran’ny minisitra rehetra teo aloha fa tsy maintsy mitondra ny ekipa ny minisitra vaovao. Miantomboka hatrany amin’ny sekretera jeneraly izany ka hatraamin’ny talen’ny kabonetra ary ireo mpanolo-tsaina isan-karazany amin’ny manodidina azy. Miova andriana miova sata hoy ny fitenenana Malagasy.
Dia toa izany koa no misy amin’ny antsoina hoe “staff technique” na ireo mpiasam-panjakana ambony izay manam-pahaizana manokana amin’ny departemanta. Miala hatrany amin’ny tale jeneraly izany ary ireo tale isan-karazany ao amin’ny ministera foibe ka hatrany amin’ny faritra. Tonga hatrany amin’ny lehiben’ny sampan-draharaha aza izany.
Noho io fenitra ny fanovana io dia làlana tsy azo ialana izany ka tsy maintsy tanterahan’ny minisitra tonga eo amin’ny toerany. Raha toa ka tsy hanatanteraka izany amin’ny sehatra rehetra izy dia tsy maintsy manatanteraka ny ampahany kely indrindra. Izany dia tsy vita ao anatin’ny iray volana fa tsy maintsy miandry andro lavalava.
Raha ny resaka ny praiminisitra dia mbola hotsaraina koa ireo mpikambana ao amin’ny governemanta ireo ao anatin’ny iray taona. Tsy maintsy manao ezaka mafy izany izay minisitra eo satria mihafohy ny fotoana isany fa tsy maintsy fanamboarana zavatra rehetra.
Tokony hiomana izany ireo mpiasam-panjakana nahazo toerana teo aloha ireo fa indrindra ny ao anatin’ny kabinetra sy ny “staff technique” fa tsy maintsy miala.